သူ့အတွက်ရတနာ ကိုယ့်အတွက် ဝေဒနာ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
All Articlesမျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးအမျိုးသမီး ကျန်းမာရေး
သူ့အတွက်ရတနာ ကိုယ့်အတွက် ဝေဒနာ
သမီး ကိုကူညီပါအုန်း ဆရာ ဒီကလေးယူလို့ မဖြစ်လို့ပါ စသည့် စကားများမှာ ကျွန်တော်တို့ ဆရာဝန်တွေ နေ့စဉ် အမြဲကြုံတွေ့ဖြေရှင်းနေရပါတယ်။
တရားဥပဒေအရ လုံးဝတရားမဝင်ပါ။ ပြုလုပ်ပေးသူကော ပြုလုပ်ခံသူ အားပေးကူညီသူတွေပါ ထောင်ဒဏ်ကျခံစေရန် ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဘာကြောင့်ဖျက်ခြင်ကြတာလဲ? အများစုက ကောင်လေးက ရှောင်နေတဲ့သူ များပါတယ်။ လက်ထပ်ရန် အဆင်မပြေတဲ့သူ တွေ မို့ ဖျက်ခြင်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ် ။ သေဆုံးမှုများအတွက် မည်သူတရားခံလဲ? လောဆည်စာရင်းများအရ မြန်မာပြည်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်သေဆုံးမှုနှုန်းက အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဒုတိယပါ ။ နှစ်စဉ် ၂၈၀၀သော ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးတွေ သေဆုံးနေကြပါတယ်။ အဲသေဆုံးတာတွေရဲ့ သုံးပုံ တစ်ပုံက ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတာတွေကြောင့်ပါ ။ ပြီး ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ သေပြီ ဆို ကွယ်ဝှက်တတ်ကြလို့ ဖျောက်ဖျက်တာတွေ မပါသေးပါဘူး။ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ ။
အဓိက သေဆုံးတာက နှစ်ခုကြောင့်ပါ ။သွေးဆိပ်သင့်တာ နဲ့ သွေးထွက်လွန်တာပါ ။ဆေးရုံကို ရောက်ရင်လည်း နောက်ကျ လွန်ခါမှ ရောက်လာကြပါတယ်။ ကလေးမမွေးနိုင်လို့သေတာ ထက် ဖျက်ချလို့သေတာက ပိုများပါတယ် ။ တော်တော်များမျုားက တုတ်နဲ့ထိုးတာ စမုတ်တံနဲ့ ထိုးဖျက်ချတာတွေ စသည်ဖြင့် လုပ်နေကြပါတယ် ။အဲလိုထိုးရင် မသန့်သော ပစ္စည်းကနေပိုးဝင် လာတာပါ ။ပိုးဝင်လာရင် သွေးဆိပ်သင့်ပြီး အသက်သေစေနိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းလို့မသေပဲ ပြန်ကောင်းရင်တောင်ကလေးရဖို့ခက်သွားပါတယ်ထိခိုက်မိတာ သားအိမ်ကိုထိုးမိတာ ပေါက်တာ ပြဲတာကနေ သွေးဆင်းလာတတ်ပါတယ်။ သွေးဆင်းတာအရမ်းများပြီးမထိန်းနိုင်ရင် သေဆုံးနိုင်ပါတယ် ။
မီးဆိုတာမလောင်ခင်ကတည်းက တားရပါတယ်။ အဲလိုပါပဲ ကိုယ်ဝန်ရမလာအောင် အစကတည်းက တားရပါမယ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘော မထားသင့်ပါဘူး။
ကလေးယူဖို့ လောလောဆည်အဆင်မပြေသေးသူတွေအတွက် မိသားစု စီမံကိန်း ဆွဲထားဖို့ လိုပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ သားဆက်ခြားနည်းသုံးတာဟာ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ လူမှုရေး စီးပွားရေး ကျန်းမာရေးဝန်တွေကို လျော့စေပါတယ်။ ချစ်သူစုံတွဲတွေလည်း သေချာဆုံးဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပညာကလည်း တစ်ပိုင်းတစ်စ ငွေရေးကြေးရေးကလည်း မပြေလည် အခြေအနေမျိုးဆိုရင် တားထားဖို့လိုပါတယ် ။
လွယ်လွယ်ကူကူ ဝယ်လို့ရ ပါတယ်။ အတူနေပြီး နာရီ၁၂၀အတွင်း သောက်ပြီး တားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရာနှုန်းပြည့်စိတ်မချရပါဘူး ။ ရသွားတတ်ပါတယ်။
ကွန်ဒုံး က ဝယ်ရလွယ်ပါတယ်။ အသုံးပြုနည်းမှန်မှန်နဲ့ ကျွတ်တာပေါက်ပြဲတာမရှိရင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တာမှန်သမျှကာကွယ်ပေးပါတယ်။အလွှာခြားနေတာမကြိုက် သူတွေကတော့ မသုံးခြင်ကြ ပါဘူး ။
လူတော်တော်များများက နောက်တစ်နည်းကိုမေ့နေတတ်ပါတယ် ။လက်မောင်းထဲ ထည့်တဲ့ ပစ္စည်းလေးအကြောင်းပါ ။တခါထည့်ထားတာနဲ့ ၃နှစ်ကနေ ၅နှစ်အထိ ခံပါတယ် ။အရမ်းကာကွယ်မှုကောင်းပါတယ် ။ လူကြားသူကြား ဆေးဝယ်ရတိုင်း ရှက်ရတာ မရှိတော့ပါဘူး ။ (ရှက်စရာရယ်တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတလေ မျက်နှာပူရတယ်လေ)။ ဆေးခန်းသွားပြီးထည့်လိုက်ရုံပါပဲ ။၁၅မိနစ်သာကြာပါတယ်။ ထည့်ထားမှန်းလည်း ဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒီနည်းလေးနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ် နော် ။
မိန်းမသားတို့ ဘဝများ အတွက် မိသားစု စီမံကိန်း ရဲ့ အရေးပါပုံကို သိစေဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပေး လိုက်ပါတယ် ။ ။
သူ႕အတြက္ရတနာ ကိုယ့္အတြက္ ေဝဒနာ
သမီး ကိုကူညီပါအုန္း ဆရာ ဒီကေလးယူလို႕ မျဖစ္လို႕ပါ စသည့္ စကားမ်ားမွာ က်ြန္ေတာ္တို႕ ဆရာဝန္ေတြ ေန႕စဥ္ အျမဲျကံဳေတြ႕ေျဖရွင္းေနရပါတယ္။
တရားဥပေဒအရ လံုးဝတရားမဝင္ပါ။ ျပဳလုပ္ေပးသူေကာ ျပဳလုပ္ခံသူ အားေပးကူညီသူေတြပါ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ျပဌာန္းထားပါတယ္။
ဘာေျကာင့္ဖ်က္ျခင္ျကတာလဲ? အမ်ားစုက ေကာင္ေလးက ေရွာင္ေနတဲ႕သူ မ်ားပါတယ္။ လက္ထပ္ရန္ အဆင္မေျပတဲ႕သူ ေတြ မို႕ ဖ်က္ျခင္ျကသူေတြလည္းရွိပါတယ္ ။ ေသဆံုးမႈမ်ားအတြက္ မည္သူတရားခံလဲ? ေလာဆည္စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္က ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေသဆံုးမႈနႈန္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဒုတိယပါ ။ နွစ္စဥ္ ၂၈၀၀ေသာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေသဆံုးေနျကပါတယ္။ အဲေသဆံုးတာေတြရဲ႕ သံုးပံု တစ္ပံုက ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်တာေတြေျကာင့္ပါ ။ ျပီး ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်လို႕ ေသျပီ ဆို ကြယ္ဝွက္တတ္ျကလို႕ ေဖ်ာက္ဖ်က္တာေတြ မပါေသးပါဘူး။ စိတ္မေကာင္းစရာပါပဲ ။
အဓိက ေသဆံုးတာက နွစ္ခုေျကာင့္ပါ ။ေသြးဆိပ္သင့္တာ နဲ႕ ေသြးထြက္လြန္တာပါ ။ေဆးရံုကို ေရာက္ရင္လည္း ေနာက္က် လြန္ခါမွ ေရာက္လာျကပါတယ္။ ကေလးမေမြးနိုင္လို့ေသတာ ထက္ ဖ်က္ခ်လို့ေသတာက ပိုမ်ားပါတယ္ ။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ုားက တုတ္နဲ႕ထိုးတာ စမုတ္တံနဲ႕ ထိုးဖ်က္ခ်တာေတြ စသည္ျဖင့္ လုပ္ေနျကပါတယ္ ။အဲလိုထိုးရင္ မသန္႕ေသာ ပစၥည္းကေနပိုးဝင္ လာတာပါ ။ပိုးဝင္လာရင္ ေသြးဆိပ္သင့္ျပီး အသက္ေသေစနိုင္ပါတယ္။ ကံေကာင္းလို့မေသပဲ ျပန္ေကာင္းရင္ေတာင္ကေလးရဖို႕ခက္သြားပါတယ္ထိခိုက္မိတာ သားအိမ္ကိုထိုးမိတာ ေပါက္တာ ျပဲတာကေန ေသြးဆင္းလာတတ္ပါတယ္။ ေသြးဆင္းတာအရမ္းမ်ားျပီးမထိန္းနိုင္ရင္ ေသဆံုးနိုင္ပါတယ္ ။
မီးဆိုတာမေလာင္ခင္ကတည္းက တားရပါတယ္။ အဲလိုပါပဲ ကိုယ္ဝန္ရမလာေအာင္ အစကတည္းက တားရပါမယ္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္သေဘာ မထားသင့္ပါဘူး။
ကေလးယူဖို႕ ေလာေလာဆည္အဆင္မေျပေသးသူေတြအတြက္ မိသားစု စီမံကိန္း ဆြဲထားဖို႕ လိုပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ႕ သားဆက္ျခားနည္းသံုးတာဟာ ကိုယ့္ပုခံုးေပၚမွာရွိတဲ႕ လူမႈေရး စီးပြားေရး က်န္းမာေရးဝန္ေတြကို ေလ်ာ့ေစပါတယ္။ ခ်စ္သူစံုတြဲေတြလည္း ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ ပညာကလည္း တစ္ပိုင္းတစ္စ ေငြေရးေၾကးေရးကလည္း မေျပလည္ အေျခအေနမ်ိဳးဆိုရင္ တားထားဖို႕လိုပါတယ္ ။
လြယ္လြယ္ကူကူ ဝယ္လို႕ရ ပါတယ္။ အတူေနျပီး နာရီ၁၂၀အတြင္း ေသာက္ျပီး တားလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာႏႈန္းျပည့္စိတ္မခ်ရပါဘူး ။ ရသြားတတ္ပါတယ္။
ကြန္ဒံုး က ဝယ္ရလြယ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳနည္းမွန္မွန္နဲ႕ က်ြတ္တာေပါက္ျပဲတာမရွိရင္ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ လိင္ကတဆင့္ကူးစက္တာမွန္သမ်ွကာကြယ္ေပးပါတယ္။အလႊာျခားေနတာမျကိုက္ သူေတြကေတာ့ မသံုးျခင္ၾက ပါဘူး ။
လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာက္တစ္နည္းကိုေမ့ေနတတ္ပါတယ္ ။လက္ေမာင္းထဲ ထည့္တဲ႕ ပစၥည္းေလးအေျကာင္းပါ ။တခါထည့္ထားတာနဲ႕ ၃နွစ္ကေန ၅နွစ္အထိ ခံပါတယ္ ။အရမ္းကာကြယ္မႈေကာင္းပါတယ္ ။ လူျကားသူျကား ေဆးဝယ္ရတိုင္း ရွက္ရတာ မရွိေတာ့ပါဘူး ။ (ရွက္စရာရယ္ေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့ တစ္ခါတေလ မ်က္ႏွာပူရတယ္ေလ)။ ေဆးခန္းသြားျပီးထည့္လိုက္ရံုပါပဲ ။၁၅မိနစ္သာျကာပါတယ္။ ထည့္ထားမွန္းလည္း ဘယ္သူမွမသိႏိုင္ပါဘူး။ ဒီနည္းေလးနဲ ့ၾကိဳတင္ကာကြယ္လို ့ရပါတယ္ ေနာ္ ။
မိန္းမသားတို့ ဘ၀မ်ား အတြက္ မိသားစု စီမံကိန္း ရဲ့ အေရးပါပံုကို သိေစဖို့တင္ျပေပးလိုက္ေပး လိုက္ပါတယ္ ။ ။
All ArticlesCovid - 19ကူးစက်တတ်သောရောဂါများအထွေထွေရောဂါများ
Rainy season and COVID19
မိုးရာသီနဲ့COVID19 မိုးရာသီက Covid19 ကူးစက်ဖို့ရာ လွယ်ကူနိုင်လားဆိုတာကတော့ ပညာရှင်တေ ွစူးစမ်းအဖြေရှာနေ ဆဲဖြစ်ပါတယ် တချို့သုတေသနပြုသူတွေကတော့ စိုထိုင်းစ မြင့်မားတဲ့ရေငွေ့အခြေအနေက ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြန့်နှံ့မှုကိုနှေးကွေးစေတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့်လည်း တချို့သော သုတေသနပြုသူတွေကတော့ အခန်းတွင်းအပူချိန်နိမ့်ကျပြီး စိုထိုင်းစမြင့်မားတဲ့အခြေအနေက ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး ပျံ့နှ့ံမှုကို ပိုပြီးဖြစ်ပေါ်aစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေကနေ ကမ္ဘာ အနှံ့ပြန့်ပွားဖို့ရာလွယ်ကူနိုင်တယ်လို့လည်းအကြံပြုကြပါတယ်…
Monsoon season and elderly
ဘိုးဘိုးဘွားဘွားတို့နဲ့ မုတ်သုံရာသီ မိုးဦးကျကာလရောက်လာခြင်းနဲ့အတူ ဘိုးဘွားမိဘသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုစောင့်ရှောက်ကူညီဖို့ရာ ပိုပြီးလိုအပ်ကြမှာပါ။ ဒီကာလမှာ ရာသီတုပ်ကွေး၊ ရင်ကြပ်ရောဂါ၊ ဆင်တုပ်ကွေးစတဲ့ ရောဂါဘယများအပြင် ခြေလက်ကိုက်ခဲတာ၊ ဝမ်းလျောတာ၊ အိပ်ချိန်မမှန်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီဥတူအပြောင်းအလဲက ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေကိုဖြစ်လာနိုင်တာမို့ မဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဘိုးဘွားမိဘတွေအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့(၇)ချက်ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ် ၁။ ပူနွေးသောအစားအစာနှင့်ရေများကို စားသောက်ပေးပါ…
Humans that poison the environment part (2)
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော လူစားများ (1) Narcissistic သူများတွေကို blame ဖို့ သီးသန့် မွေးဖွားလာတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက်ပဲ ဝိုင်းပြောနေပါစေ၊ သူကဘယ်တော့မှ မမှားဘူး။ သူနဲ့ ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အမှားသာဖြစ်တယ်။ Narcissistic type တွေဟာ သူတို့ရဲ့…